UMEV01 sy UMEV02 dia singa fanaraha-maso sy fanaraha-maso miaraka amin'ny efijery miloko LCD touch, manana interface interface-friendly User, natao manokana ho an'ny charger EV. Izy io dia mifandray amin'ny BMS, ary mifehy ny maodelika famahana mba hamenoana ny dingan'ny famandrihana, ary Izy io dia manana asa isan-karazany toy ny faktiora, ny famakiana karatra, ny tamba-jotra, ny firaketana ny angona, ny fanaraha-maso lavitra, ny fanairana diso ary ny fangatahana.
Ny modely fanaraha-maso ny antontan-tarika umev04 dia miaraka amin'ny efijery miloko LCD ary manana interface manokana ifandraisana amin'ny solosaina amin'ny olombelona. Izy io dia natao manokana ho an'ny fenitra eropeana sy ny fenitra japoney manefa antontam-piarakodia mandeha amin'ny herinaratra. Manohana ny CCS + CHAdeMO + AC, CCS + GB / T + AC, CCS + CHAdeMO + GB / T, sns.
UR50060-W （B） Module famoahana EV dia novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia mirehareha amin'ny tombotsoan'ny fanitsiana ny hery avo lenta, ny fahombiazana avo lenta, ny haavon'ny herinaratra avo, ny fahamendrehana avo lenta, ny fifehezana manan-tsaina, ny endrika kanto ary ny fibodoana kely. Ny famolavolana lozisialy avo lenta sy ny teknika fanaraha-maso nomerika marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana sy hahazoana antoka
UR100030-SW (B) modely famandrihana EV novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana volavolan-kery famokarana herinaratra tsy tapaka. Izy io koa dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra avo, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
Ny UR50040-W EV dia manome torolàlana manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia mirehareha amin'ny tombotsoan'ny fanitsiana ny hery avo lenta, ny fahombiazana avo lenta, ny haavon'ny herinaratra avo, ny fahamendrehana avo lenta, ny fifehezana manan-tsaina, ny endrika kanto ary ny fibodoana kely. Ny famolavolana lozisialy avo lenta sy ny teknika fanaraha-maso nomerika marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.